Canjeero sareenka, mooska iyo kookaha | Cunnooyinka jikada
Boorashka lowska, mooska iyo kookaha
Maria vazquez | | Cunnooyinka miraha leh
Hadda oo karantiilku dhammaanteen noo oggolaanayo inaan ku raaxeysto a quraacda oo aamusan gurigaWaa maxay sababta aan loo samayn canjeelada qaar? Guriga waxaan ku isticmaalnaa dhammaadka usbuuca, markaan helno waqti dheeri ah oo aan wax ku karsano, laakiin hadda waqti kasta waa waqti fiican oo iyaga la sameeyo! Ma u taagan tahay Qof kastaa wuu ka qaybqaadan karaa, xitaa kan ugu yar.
Kuwaas boorashka, mooska iyo canjeelada kookaha waa wax aad u fudud; bedel weyn oo loogu talagalay dhammaan kuwa aan waligood sameynin inay ku farxaan. Waxay sidoo kale aad u caafimaad qabaan; Waxaan ku darnay shaaha oo sonkor ah laakiin waad sameyn kartaa la'aanteed. Muusku markuu bislaado ku filan, macaankiisu wuu ku filan yahay inaadan seegin.
Carruur ma ku leedahay guriga? Hadday sidaas tahay, iyaguna way ka qaybqaadan karaan diyaarinta quraacdan. Ka taxaddar cajiinka oo ka samee canjeelada digsiga una daa iska ilaali qurxinta iyaga. Dhowr xabbo oo miro ah, kareem lows ah, qorfe yar yar ama qaar ka mid ah jajabyada shukulaatada madow waxay noqon karaan wehel weyn.
Boorashka mooska, mooska iyo kookaha ayaa ku habboon inay quraacdeenna kala duwanaan. Si fudud loo sameeyo oo caafimaad leh, kuma qaadan doonaan wax ka badan 20 daqiiqo.
Nooca cuntada: Quraac
Waqtiga karinta: 10 m
Wadarta waqtiga: 15 m
30 g. jajabka oat
1 muus oo bisil
Teaspoon qaaddo shaah ah oo kookaha saafi ah
½ qaado yar oo qorfe ah
1 qaado oo sonkor ah (waad iska dayn kartaa)
Cabitaanka khudaarta yicibta
1 xabbo oo subag ah
Xaleef muus la dubay iyo malab si loo qurxiyo
In a muraayad isku dar ah Dhig jajabka oat, mooska la shiiday, kookaha iyo qorfe.
Waan garaacnay gaaro cajiinka isku mid ah oo waxaan ku darnaa cabitaanka yicibta, haddii loo baahdo, illaa aan ka gaarno qaabka sida kan saafi ah. Khibradeyda, 1 ilaa 3 qaado oo caano ah ayaa badanaa lagama maarmaan ah.
Nasiino cajiinka ku jira qaboojiyaha inta aan ka sameynayno mooska la shiilay.
Kadibna waan isla faafinay skillet nonstick subag yar oo markay kulul tahay waxaan ku shubaynaa digsi cajiinka ku dhex jira.
Waxaan karnaa canjeelada kuleylka dhexdhexaadka ah illaa salka uu khafiif ka noqdo oo goobooyin qaar ka soo baxaan cajiinka. Marka, waxaan ku wareejineynaa spatula oo waxaan ku karineynaa dhinaca kale. Waa wax iska caadi ah in kii ugu horreeyay uusan si fiican u socon, laakiin waxaad heli doontaa hangoolkiisa.
Waxaan digsiga ku rognaa saxan oo ku celcelinaa tillaabooyinki hore ilaa aan ka dhammeyno cajiinka, annaga oo urursaneyna canjeelada aan sameyneyno si aan u kululaano.
Waxaan ku adeegnaa moos la dubay iyo malab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka miraha leh » Boorashka lowska, mooska iyo kookaha
Keeg shukulaato ah oo guriga lagu sameeyo
Kaabashka, pear iyo saladh hazelnut